Nezvedu - Hebei Chenli Rigging Group Co., Ltd.
Electric cheni chitakuriso
Troelly / Pulley / Magineti
Tambo Yekudhinda Mutambo
Hunhu Kudzora Sisitimu
Hebei Chenli Boka Co, Ltd. (Chenli Boka) inochengetedza matatu ese ane chikamu uye 4 inogoverwa inodzorwa makambani ebazi, iri mutaundi rekumusha kwekusimudza uye kubiridzira zvigadzirwa mudunhu reHebei, rinova bhizimusi hombe iro rakanangana nekutsvagisa - kugadzira uye kugadzira zvigadzirwa zvekubira nekusimudza. Mazhinji akateedzana anopfuura anopfuura 3000 akasiyana maratidziro, kugadzirwa uye kuungana kugona kwasvika mamirioni manomwe seti Simba redu rakazara rinomira pamberi pevakwikwidzi muindasitiri yedu.
Chenli Boka rako repamusoro mhando yekugadzira tekinoroji uye manejimendi timu, Yemazuva ano flat manejimendi sisitimu uye yekugadzira tekinoroji kudzora maitiro mashandiro maitiro, anga achinyatso apedza shanduko kubva mukutonga manejimendi kuita kudzivirira kudzivirira. Vakarongeka vashandi vanoshanda mhando uye zvigadzirwa zvigadzirwa zviri padyo kana kupfuura 4σ
Kubva 2000, Chenli Boka rakashongedzwa mabhizinesi ane sainzi manejimendi uye sainzi tekinoroji. Kambani yedu yakadyara mamirioni makumi maviri eRMB, yakavakirwa boka rekambani mhando yekuyedza. Mune imwechete indasitiri pamberi Chenli Boka rakapfuudza iyo ISO9001 yepasi rose mhando manejimendi manejimendi standard standard.Muna 2005, chigadzirwa chakapasa European CE, Germany GS chigadzirwa chemhando uye chengetedzo chitupa. Chenli Boka zvichiteerana muna 2008, 2010, uye 2012 akawana "yekusimudza cheni", "kusimudza chipfuramabwe", "kusimudza chipfuramabwe kurongedza bhokisi" matatu emunyika patents,
Motto yekambani yeChenli Group ndeyekuti mutengi akarurama nariini. Kuvimbika uye kuchengeta kutenda, kuita bhizinesi zvinobudirira, parizvino Chenli Boka renyika yedu rinopfuura zana boka rekambani hombe, nyika yekutanga chirongwa chakapa yakachengeteka uye yakavimbika mhando dzakasiyana uye kudomwa kwezvigadzirwa. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumachini, simbi, simba remagetsi, njanji, zvirongwa zvekuchengetedza mvura, zviteshi, ndege, mauto, mota, peturu uye makemikari maindasitiri nezvimwe zvigadzirwa zveChenli zvinotengeswa mumatunhu anopfuura makumi matatu epamba, maguta nenzvimbo zana, Zvakadai. seMiddle East 、 iyo European Union, Southeast Asia, North neSouth America nezvimwewo Zvinotumirwa kune nyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu .Product zvinogamuchirwa zvakanaka uye zvinotendwa nevatengi.Pasi pekutsigirwa kwako Chenli Boka rave indasitiri manejimendi mitsva uye tekinoroji. innovation mutungamiri .Chenli Boka richaita chenli brand vatengi vane hupfumi nekusingaperi, Chenli Boka rinoda kugara rakamira nemi.
Yakakwira mhando, yakakwira nhanho, rega vatengi vanzwe kuchengetedzeka, kuvimbika, nyore nyore!
Mutungamiri wekubiridzira indasitiri manejimendi, hunyanzvi uye hunyanzvi hwekugadzira zvinhu.Chenli Boka rinoda kugara rakamira nemi, richaita kuti vatengi veChenli brand vave nepfuma zvachose.
Kusimbirira kuvandudzwa, wega makomba ekudyira epamberi manejimendi manejimendi manejimendi, mukana wehunyanzvi, mukana webhangi, gara uchisangana nezvinodiwa mutsika.
HEBEI CHENLI BOKA:
Kubva 1991, Musoro Kambani
Kubva 2005, Qing Yuan Company
Kubva 2012, Boye Company
CHENLI ZVINOGONESESA ZVIRI PASI POSE
Dzvanya apa kuti uwane rumwe ruzivo
Hebei Chenli Boka Co, Ltd.
Hot Zvigadzirwa - Sitemap Verenga Zvakawanda